Ukukhiqiza Ingxubevange Steel CNC Machine Izingxenye & Izingxenye | Isitolo se-PTJ
Ikhaya > Izinhlobo zezinto ezibonakalayo > Izimboni Zensimbi
Precision Ingxubevange CNC NGCWELE futhi baphendukela IZINGXENYE
Yenza ingxubevange izinsizakalo ezingezona ezejwayelekile zokwenziwa kwezinsiza zezinto ezincane, ezinkulu nezindayo.
Lapho izimboni ezintsha zikhetha ukuphayona ekusetshenzisweni kwama-alloys amasha, zibiza i-PTJ Shop ukuthola umphumela wendabuko: ukunikezwa okuthembekile okungaguquki kwezingxenye zekhwalithi ephezulu.
I-PTJ inedumela lokusebenzisa ngempumelelo izinsimbi abanye abakhiqizi abakhetha ukungaziphathi. Amakhasimende angaklama ngokuzethemba ngezinto ezintsha, evikelekile ekwazini ukuthi i-PTJ ingakwazi ukwenza umshini ngisho nama-alloys angajwayelekile, asezingeni eliphakeme kakhulu ekhwalithi, nomphumela osebenza kahle.
Ama-alloys we-PTJ Supply Metal namasevisi wensimbi wensimbi wensimbi. Igxile ekugundeni ngokunemba, isibhakela, ukwakha, ukugoba ithubhu, ukuwelda, ukuhlolwa kukasilika, kanye nokumbozwa kwempuphu. Izinto ezisetshenzisiwe nazo zifaka phakathi i-carbon nensimbi engagqwali, i-galvanneal kanye ne-galvanized, nama-aluminium amashidi, ithusi, ishidi elinamapulangwe, insimbi enwetshiwe, i-wire mesh, ne-bar bar, ama-engeli, kanye nesitoko esiyindilinga. Ubunjiniyela bendlu, ukugoqa amashidi, ukubopha, ukuqeda, nokuhlola nakho kuyanikezwa. Isebenzisa i-CNC turret punch press, cindezela ukubopha, i-in-house tube bender, i-fastener efakwa, nemishini yokuhlola.
Zimbalwa izinto okulula ukuzisebenzisa kumshini kune-alloy, ngakho-ke abathengi be-smart alloy element bakhetha umphakeli wabo wezingxenye zensimbi ngokusebenzisa into elula enqumayo: ubani engingamethemba ukuletha imikhiqizo enemba ngomshini engiyidingayo ngqo lapho ngiyifuna?
Xhumana nathi ngokwezifiso ingxubevange izingxenye imishini namuhla ukuxoxa ngokuningiliziwe kwezingxenye zakho eziyinkimbinkimbi.
1.Custom nomkhiqizi isikulufa imikhiqizo umshini & izingxenye waphenduka. .
Imikhiqizo ehlukahlukene ifaka phakathi ama-bushings, amakhola, izixhumi, izikhonkwane, imiphini, izikhala nezipali. Ingxubevange yensimbi, i-aluminium, ithusi, ama-alloys ethusi, i-carbon steel, ithusi nezinto zensimbi engagqwali ezisetshenzisiwe. Ubukhulu bengxenye ubude bungu-4 ngaphakathi, kanti ububanzi bangaphandle bungaba kusuka ku-5/16 ku. Kuye ku-4/3 ku. Amandla afaka izinsizakalo zemishini yesikulufa njengokubhora, ukuphazamisa, ukubhola, ukugaya, ukugoqa, ukugaya, ukupholisha, ukuphinda usebenzise i-reaming, kanye iyajika. I-Aerospace, ezolimo, ezokwakha, ezezimoto, ezobuchwepheshe, ezikagesi, ezokwelapha, ezempi nezinye izimboni ezisetshenzisiwe. I-NADCAP, ISO 4: 9001, AS2008, ne-TS 9100: 16949 iqinisekisiwe.
2.Custom nomkhiqizi izingxenye ogayiwe.
Izinto zokwakha zifaka i-aluminium, i-beryllium, ithusi, i-carbon steel, i-cobalt, ithusi, i-iron, i-lead, i-ABS, i-acetal, i-nylon, i-PTFE nabanye. Iyakwazi ukuphatha izingxenye ezifika ku-12. L x 12 in. W x 12 in. H ubukhulu nge +/- 0.0001 in. Ukubekezelelana. Amandla ahlukahlukene afaka ukusika, ukuchuma, ukujika, ukubhola, ukuthepha nokuguqula ubunjiniyela. Izinsizakalo zesekondari zifaka ukuhlangana, ukucabanga okuphikisayo, ukucindezela, ukuqamba kabusha, ukufaka amapuleti, ukudlula, ukugcoba abanye nokunye. Okukhethekile, ukukhiqizwa okuncane kuya kokukhulu nokukhiqizwa kwevolumu ephezulu kungenziwa. I-Aerospace, ezolimo, ezokwakha, amakhemikhali, amazinyo, ezasolwandle nezinye izimboni zisebenzile. Izinsizakalo eziphuthumayo nezisheshayo ziyatholakala. Ihlangabezana namazinga we-AS. Ukulethwa ngesikhathi.
3.Ultra ngokunemba 5-eksisi CNC machining services for ingxubevange izingxenye.
Amakhono afaka phakathi i-CNC milling, honing kanye ne-welding. Izinsizakalo zokugaya ngaphezulu, ukuphazamisa kanye nokushaya ziyatholakala. Ifanele ukubekezelelana okuqinile namajometri ayinkimbinkimbi. Amafayela we-CAD / CAM amukelwe. Ukulethwa ngesikhathi.
Uyamenywa ukuthi uzibonele mathupha lawa makhono abaluleke kakhulu emishini. Xhumana nathi ukuthola impendulo ngokushesha engxenyeni yakho yezingxenye zemishini.
Xhumana nathi Isitolo Somshini we-CNC ukuxoxa ngezidingo zakho zengxubevange namuhla.